WARARKII U DANBEEYAY DACWADDA KURSIGA FAHAD YAASIIN | dayniiile.com
Home WARKII WARARKII U DANBEEYAY DACWADDA KURSIGA FAHAD YAASIIN
Maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta dhegaysatay doodda dacwad ku saabsan go’aankii guddiga doorashooyinka heer Federaal ee FEIT uu ku laalay doorashadii kursiga Hop#086.
Kursiga oo uu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayuu guddiga FEIT go’aamiyay in dib loogu noqdo doorashadiisa kadib markii guddigu ku tilmaamay mid lagu doortay si baal-marsan habraacyadii doorashooyinka.
Fahad Yaasiin ayaa dhowaan Maxkamadda sare u gudbiyay dacwad ka dhan ah go’aankii guddiga doorashooyinka FEIT uu ku baabi’iyay doorashadii kursiga Hop#086 islamarkaana ku sheegay in dib loogu laabanayo doorashada kursigaas.
Xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya oo u doodaya guddiga FEIT ayaa isna soo saaray qoraal uu maxkamadda kaga dalbanayo in gebi ahaanba la diido dacwadda ka dhan ka ah guddiga doorashooyinka.
Maxkamadda ayaa sidoo kale dhegaysatay dooddda labada dhinac ee kala ah xafiiska garqayaanka guud ee dowladda iyo qareenka uu wakiishay Fahad Yaasiin kaas oo ku doodaya in guddiga FEIT aysan awood u lahayn burinta doorashadii kursiga Hop#086.
Maxkamadda sare ayaa dhegaysi kadib sheegtay in ay dib ka soo saari doonto xukunka dacwadda u dhexaysa Fahad Yaasiin iyo guddiga doorashooyinka dadban ee heer Federaal.
Previous articleMaxkamadda sare ee dalka oo billowday dhegaysiga dacwadda hakinta kursiga Fahad Yaasiin
Next articleMADAXWEYNE SICIID DENI OO MAANTA KU WAJAHAN MUQDISHO
Dadka ka soo qeybgalay xaflada aroos oo la afduubtay gobolka Zamfara...